खुलासा नं. ४ : पम्पहरूबाट रकम अशुल्दै आयल निगम, घुस नदिएको भन्दै पम्पहरूमा तेल रोक्का
Tuesday, 27 Oct, 2015 3:08 PM
१०, असोज काठमाडौँ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलपम्पहरूलाई तेल वितरण गर्दा ब्यापक मात्रामा रकम अशुल्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । निगमको भैरहवा डिपोले तेल वितरण गर्दा अधिकांश पेट्रोलपम्पबाट मासिक रूपमा अतिरिक्त रकम अशुल्दै आएको रहस्य खुलेको हो ।
पश्चिमाञ्चलमा तेल वितरण गर्ने जिम्मा पाएको भैरहवास्थित् भलवारी डिपोले त्यस क्षेत्रका पेट्रोलपम्पहरूमा रकम अशुल्ने र घुस नपाए तेल नदिने गरेको व्यवसायीहरूले ब्यापक गुनासो गरेका छन् । भैरहवा डिपो प्रमुख दिनेश कुमार यादवले मासिक ५ हजार लिँदै आएको र अहिले त्यति रकमले नपुगेको भन्दै तेल नदिएको एक पम्प व्यवसायीले गुनासो गरे । स्रोतका अनुसार डिपो प्रमुख यादवले आफैले सिधै रकम अशुल्ने गर्छन् । त्यसैका लागि उनले कसलाई तेल दिने/नदिने लिष्ट बनाउने र रकम नदिनेलाई तेल नदिन आफु मातहतका कर्मचारीलाई बाध्य पार्ने गरेका छन् । बुटवलका एक पम्प सञ्चालकले न्यूजसेवा डटकममा फोन गरि भने, “यसअघि तेल नदिएर बाध्य पारेपछि मासिक ५ हजार दिँदै आएको थिएँ, अहिले १० हजार मागेको छ, १०/१० हजार तिरेर हामी कसरी बाँच्ने, दुख दिनुको पनि हद हुन्छ नि ? ” उनी मात्र होइन अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ लगायतका जिल्लाका अधिकांश पेट्रोलपम्पले घुस दिएर मात्र तेल लैजाने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
मागेजति घुस दिए तेल फालाफाल
भैरहवा डिपो प्रमुख यादवलाई घुस खुवाउनेले जतिपनि तेल पाउँछन् । एक व्यवसायी भन्छन्, पहुँच भएका र बढि रकम घुस खुवाउनेले मागेजति तेल पाउने गरेका छन् । तर घुस नदिने पम्पहरूलाई महिनामा ३ केएल तेल पनि नदिएको पम्प व्यवसायीहरू बताउँछन् । अर्घाखाँचीका एक पम्प सञ्चालकले भने “म भैरहवा डिपोमा धाएको ५ दिन भयो, मलाई तेल छैन भन्ने, कहिले भोलि दिन्छु भन्दै झुलाइरहेको छ, तर दाङको एक पेट्रोल पम्पले भने मेरै अगाडी २ पटक सम्म ६ केएलका दरले डिजेल र पेट्रोल लग्यो, यस्तो अन्याय कसरी सहने हामीले ? ”
पिएनको काम आफै गर्दै यादव
क्षेत्रीय डिपो भैरहवाका प्रमुख हुन् दिनेश यादप । उनको काम भनेको सहज रूपमा तेल आपूर्ति गर्ने, न्यायोचित वितरण गर्ने हो । तर उनी बिहानदेखि बेलुका सम्म कसलाई तेल वितरण गर्ने नगर्ने लिष्ट बनाउने र कसले तेल लोड गर्यो, गरेन भन्दै कुर्ने र घुस नदिएका पम्पहरूलाई लोड गर्न नदिने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
भैरहवाको भलवारी डिपो त्यहि डिपो हो, जहाँ निगमकै कर्मचारीको मिलेमतोमा तेल चोरी हुने गरेको घटना पटक पटक आइरहेका हुन्छन् । एकवर्ष अघिको तेल चोर काण्डमा पक्राउ परेपनि तेलचोरहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो निगमले । अहिले तिनै तेलचोरहरूको साँठगाँठमा यादवले डेरा जमाएर अनियमितता गरिरहेका छन् । उनीहरूको मिलेमतोमा कसलाई तेल दिने, नदिने लिष्ट बनाउने गरेको भैरहवा डिपो स्रोतको दाबी छ ।
भैरहवा डिपोमा ब्यापक अनियमितता हुँदा पनि आयल निगम केन्द्रिय कार्यलय मौन छ । भारतीय अघोषित नाकाबन्दी पछि मुलुकमा इन्धन हाहाकार छ । केन्द्रका व्यवस्थापक÷पदाधीकारी आपूर्ती सहज कसरी हुन्छ भन्नेमा लागिरहँदा यादवले भने भैरहवामा आएको थोरै तेलमा पनि कमाउ धन्दा मच्चाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । पम्पहरूमा भत्ता उठाउन जसरी आएर पैसा अशुल्ने गरेको विषयमा केन्द्रलाई जानकारी गराउन खोज्दा केन्द्रले कुनै वास्ता नगरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
त्यसोत, भैरहवामा भएको ब्यापक अनियमतिता र घुस प्रकरणबारे बुझ्न खोज्दा भैरहवा डिपो प्रमुखसँग सम्पर्क हुन सकेन । उनको मोबाईल नम्बर ९८५७०२३२२० अफ छ भने भैरहवाको डिपोको ल्याण्डलाइन नम्बर ०७१५६०८२८ नम्बरमा फोन उठ्दैन । यादवले आफुलाई सुधारेर तेल नदिए अख्तियारमा उजुरी हाल्ने व्यवसायीहरूले तयारी गरेका छन् ।